Okthobha 2021-Funda ukurhweba
I-USD ilindele i-Fed kunye ne-NFP, Ngaba iBhanki yaseNgilani iya kuphakama kwiSithuba?
I-Fed kulindeleke ukuba ibhengeze ukuba izakuqala ukunciphisa ibhondi yayo enkulu yenyanga kunye nokuthengwa kwe-asethi. I-tapering inokuqala ngokukhawuleza emva kweentsuku ezimbalwa emva kwengqungquthela. Abatyali mali phantse ngokuqinisekileyo baya kuhlawula ngononophelo Usihlalo kaPowell inkomfa yeendaba kuba isiphumo sele sithunyelwe ngokufanelekileyo ngetelegraph.
Iireyithi zexesha elifutshane ziye zanda kakhulu, kodwa izivuno zexesha elide azikwazanga ukulandelwa, okubangele ukucolwa kwegophe lesivuno. Inye kuphela inkcazo kukuba abatyali-mali bakholelwa ukuba abenzi bomgaqo-nkqubo baya kunyanzeliswa ukuba benze ngokukhawuleza kwimilinganiselo yenzala, kodwa ukuba uqoqosho olungazinzanga luya kubathintela ekunyuseni amaxabiso ngokukhawuleza.
Le veki iya kulawulwa sisibhengezo se-tapering esele silindelwe esivela kwi-Fed, kunye nedatha ye-Oktobha yengqesho yongeza kwi-hype. Intlanganiso eqhelekileyo ye-Reserve Bank yase-Australia nayo icwangcisiwe.
IBhanki yaseNgilani, kwelinye icala, inokubangela ezona ziphithiphithi kwimarike njengoko iqwalasela ukuba inganyusa inzala ngokukhawuleza kunokuba ilwe nokunyuka kwamaxabiso. Kumphambili wedatha, izibalo zengqesho ezivela eCanada naseNew Zealand ziya kuba zezinye iimbalasane, ngelixa intlanganiso yenyanga ye-OPEC ayinakwenzeka ukuba ibangele naluphi na utshintsho kwizicwangciso zokwenziwa kwemveliso.
I-Reserve Bank yase-Australia ikwenze kwacaca gca kwiimarike ukuba ayinanjongo yokunyusa inzala kude kube ngu-2024. Uqoqosho, kwelinye icala, lubonakala lulungiswa e-Australia, kunye nokuvalwa okuthe gqolo okuphakanyiswayo njengamazinga ogonyo. ukubamba abo baseYurophu naseMelika. Ngeli xesha, izalathi zamaxabiso ziqalisile ukunyuka phezulu, nto leyo ebonisa ukuba ukunyuka kwamaxabiso kuyenyuka.
IBhanki yaseNgilani iye yalawula ngokungaguqukiyo amaxabiso emarike ngokunyuka kwereyithi ukusuka kwintlanganiso yayo yokugqibela ngoSeptemba. Iziphakamiso eziphindaphindiweyo zeFed ukuba ukunyuka kwezinga kuya kuba "ifanelekile" ngaphambi kokuba ukuthengwa kwe-asethi kuphelelwe lixesha - inyathelo elingazange libonwe kwindawo yokunciphisa ubungakanani - linyuse amathuba emarike okunyuka kwenqanaba le-15 ngoNovemba ukuya ngaphezulu kwe-60%, kunye nokunyuka kwentengo ngoFebruwari ngokupheleleyo.
Nangona kunjalo, amanye amalungu e-MPC awabonakali ethanda ukuqiniswa kwangaphambi kwexesha, kwaye i-BoE inerekhodi eliguquguqukayo xa ifika kunxibelelwano olucacileyo. Ngenxa yoko, kukho ithuba lokuba ukubheja kwe-hawkish kuhambe kakhulu.
tags FED, Indawo yeFed
I-Ethereum (ETH) Uhlalutyo lwexabiso: I-Ether kwi-Minor Retracement, i-May Resume an Uptrend
Ixabiso le-Ethereum lidibene ne-$ 4,445 ephezulu
I-Ether inokuhla ukuya kwi-$ 4,109 ephantsi
Ixabiso langoku: $ 4,249.15
Intengo yeNtengiso: $ 500,474,728,891
Umthamo wokuThengisa: $ 17,251,740,375
Iindawo ezinkulu zokubonelela: $ 3,000, $ 3,500, $ 4,000
Iindawo ezifuna kakhulu: $ 2,500, $ 2,000, $ 1,500
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) nge-Okthobha 31, 2021
I-Ethereum (i-ETH) ixabiso libuyisela emva kokukhatywa kutshanje kwi-4,456 yeedola. Ekuqaleni, i-cryptocurrency ibuyele kwi-$ 4,235 ephantsi kwaye ilungiswe phezulu. Ukulungiswa okuphezulu kupheliswe kwi-4,400 ye-$ ukuchasana njengoko iibhere ziqala ukuhamba phantsi. I-Ether iye yawa phantsi kwe-4,164 yeedola kwaye yaphinda yaqala phezulu. Ukuba inkxaso yangoku ibambe, imarike iya kuqhubeka nokunyuka phezulu. Nangona kunjalo, ukuba inkxaso yangoku iyasilela ukubamba, i-downtrend iya kuqalisa kwakhona.
I-Ethereum ikwinqanaba le-59 ye-Relative Strength index period 14. Ibonisa ukuba i-crypto isendaweni ye-uptrend kwaye ingaphezulu kwe-centerline 50. I-Ether ingaphezulu kwe-25% ye-stochastic yemihla ngemihla. Imarike ikwisantya esiphezulu.
Kwitshathi yeyure eyi-1, i-ETH/USD ikwintshukumo ehlayo. Izibane zeBullish zibonisa ukunyuka okunokwenzeka kwe-Ether. Okwangoku, ngo-Oktobha 30 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-61.8% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-Ether iya kuwela kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci extensions okanye inqanaba le-$ 4,109.77. Ukususela kwisenzo sexabiso, i-Ether iwile phantsi kwe-$ 4,170 kwaye iphinda iqalise phezulu.
Uhlalutyo lwexabiso leBitcoin: Iinkunzi zeenkomo ziyazama ukugcina unyawo olungaphezu kwe-60,000 yeedola phakathi koBullish Flag Formation
Ukulandela okunye ukusilela ukubuyisela amanqaku angama-63,000 edola ngoLwesihlanu odlulileyo, Bitcoin (BTC) iye yawela kumjikelo osezantsi ukuya kwinqanaba leengqondo lee-$60,000. Oko kwathiwa, uninzi lwe-altcoins luye lwafumana ikamva elifanayo kwiiyure ezingama-48 zokugqibela, kunye nokurekhoda okuphindwe kabini ukuhla.
I-benchmark cryptocurrency yayinomsebenzi ofana ne-roller-coaster kule veki emva kokuba yehla ngokukhawuleza ukuya kwi-57,500 yeedola ngoLwesine kwaye iphinde yabuyela kwindawo ephezulu--$61,000 kwimizuzu embalwa. Le ngozi incinci yeflash yeza emva kokuba ibuyele ekuweni kwayo yamva nje engaphantsi kwe-60,000 yeedola.
Emva kolu tshintsho, i-BTC igcine uxinzelelo lwe-bullish kwaye yachukumisa ngokufutshane i-$ 63,000 yokuchasana okubalulekileyo ngoLwesihlanu.
Nangona kunjalo, iibhere zenza imali kwipropathi eguquguqukayo yesithintelo seedola ezingama-63,000 kwaye zawathoba amaxabiso. Kwiiyure ezimbalwa kamva, i-cryptocurrency ephambili yehla ukuya kwinqanaba le-$ 61,000 kwaye, emva koko, iphantsi.
Isenzo sexabiso le-bearish sityhale ixabiso lemarike ye-Bitcoin ngaphantsi kwe-1.15 yezigidigidi zeedola kunye nokulawula kwayo kwimarike ngaphantsi kwe-45%.
Okwangoku, i-Ethereum (eye yabhala i-high-time entsha ngoLwesihlanu) iyancipha ngaphezu kwe-$ 260 kwiiyure.
I-Binance Coin (BNB), i-Cardano (ADA), i-Solana (SOL), i-Ripple (XRP), i-Polkadot (i-DOT), i-Dogecoin (i-DOGE), kunye ne-Shiba Inu (SHIB) zonke zithengiswa phantsi namhlanje ekuseni -1.2%, -2.5% , -4.3%, -0.5%, -4.1%, -7.3%, kunye -12.6%, ngokulandelanayo.
Amanqanaba aphambili eBitcoin aBukelwayo-Okthobha 31
Njengoko kuphawuliwe ngaphambili, i-BTC isemngciphekweni wokuwa kwinkxaso ye-60,000 yeedola phakathi kwecala elicala lilonke. Ukuwa kwinqanaba lexabiso langoku kunokutyhala i-benchmark cryptocurrency ukuvavanya kwakhona inkxaso ye-57,500 yeedola, ekufuneka ihambelane ne-4 yeyure ye-200 SMA ukuba oko kuyenzeka.
Okubangela umdla kukuba, i-BTC ngoku irhweba ngaphakathi kweflegi ye-bullish kwitshathi yethu yeeyure ezi-4. Oko kuthethiweyo, ukuba nokwenzeka kokuntywila ngaphantsi kwenkxaso yeedola ezingama-60,000 kwixesha elikufuphi kubonakala ngathi kunokwenzeka kodwa kufanele kukhuthaze ukuchacha okubukhali ngaphezulu kokuxhathisa kwe-65,000 yeedola. Nangona kunjalo, ikhefu (ngaphandle kokuwela kwi-57,000 yeedola) ngaphezulu kweflegi yethu kufuneka iqalise ukuchacha kwakhona, nangona amandla angaphantsi kunemeko ekhankanywe kutshanje.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-61,000 yeedola, i-61,785 yeedola, kunye ne-63,000 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$60,000, i-$59,000, kunye ne-$57,500.
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 1.13 zezigidi
I-Bitcoin Dominance: 44.4%
I-USOIL (i-WTI) IkuMmandla oThengisiweyo, unokuphinda aqalise ukuthengisa ngoxinzelelo
I-USOIL ikwinyathelo eliphezulu njengoko ixabiso lifikelela kummandla othengwe ngokugqithisileyo. Kwinyathelo lexabiso langaphambili, i-WTI ifikelele phezulu kwi-85.39 yeedola kwaye yagxothwa. Isalathiso sibuyele kwi-82 yeedola ephantsi kwaye saphinda saqalisa intshukumo entsha yokuya phezulu. Kwi-uptrend yokuqala, imarike yehlile ukuya kwi-85.39 yeedola. Iinkunzi kunokwenzeka ukuba ziphinde zivavanye umgangatho wokumelana ukuze ziqhekeze ngaphezu kwayo. I-USOIL iya kuncipha ukuba iinkunzi zeenkomo ziyasilela ukuphula inqanaba lokumelana langoku.
I-USOIL (i-WTI) ikwinqanaba le-64 ye-Relative Strength Index ixesha le-14. Nangona i-retracement, isalathiso sisekwindawo ye-uptrend. Iyakwazi ukuqhubela phambili. Imigca yentsingiselo izotywe ibonisa amanqanaba enkxaso yamaxabiso. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
Kwitshathi yeyure enye, i-WTI ikwi-uptrend. Isalathiso siwile ekukhatyweni kwangaphambili. Abathengi bazama ukutyhala isalathiso phezulu ukuze baphinde baphinde bajonge iindawo eziphezulu zangaphambili. Okwangoku, ngo-Oktobha 1 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-28% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-WTI iya kunyuka kwinqanaba le-61.8 i-Fibonacci extension okanye i-$ 1.618. Ukususela kwisenzo sexabiso, isalathisi sivavanye ukongezwa kweFibonacci. Iyawa ngenxa yokuba imarike ifikelele kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo.
Isalathisi singaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isalathiso ngoku sikummandla othengiwe kakhulu. I-avareji ezihambayo zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
I-USOIL (WTI) ithengisa kummandla othengwe ngokugqithisileyo. Kwi-uptrend yokuqala, imarike yenyuka kwinqanaba le-77 lexesha le-RSI 14. Oku kubangela ukuba isalathisi sehle. Okwangoku, i-WTI inyuka kancinci ukuze iphinde ijonge iindawo eziphezulu zangaphambili.
IDola iBuyiselwa kwakhona ngokulandela iData ye-PCE eqinile yokunyuka kwamaxabiso
Idola izama ukuchacha okubanzi kwiseshoni yokuqala yase-US, ngokuyinxenye ngenxa yeenkcukacha-manani eziqinileyo zokunyuka kwamaxabiso kwaye ngokuyinxenye ngenxa yezithuthi zokuphela kwenyanga. Umqolo oluhlaza, kwelinye icala, uneveki edibeneyo. Iimali ezinamandla kakhulu kule veki yi-dollar yase-Australia kunye ne-Swiss Franc, kunye neyokugqibela inyuswe ngokuthenga okunamandla ngokuchasene ne-Euro.
Iyen ngoku yeyona mali ibuthathaka kwaye iya kuhlala injalo. Zombini i-euro kunye nedola yaseKhanada zibuthathaka ngenxa yokungaphumeleli kweebhanki zabo ezingundoqo ekuveliseni izinto ezizinzileyo.
NgoSeptemba, ingeniso yomntu e-United States yawa -1.0 ekhulwini umama, okanye i-USD 216.2 yezigidigidi, imbi kakhulu kunokuba ilindeleke i-0.1 yepesenti yokwanda komama. Inkcitho yomntu inyuke ngeepesenti ze-0.6, okanye i-USD 93.4 yezigidigidi, eyayihambelana noqikelelo.
Headline Ukunyuka kwamaxabiso ePCE inyuke yaya kutsho kwi-4.4 ipesenti ye-YoY, eyayingaphantsi kune-4.7 yepesenti ye-YoY. Inkcazo yexabiso le-PCE engundoqo yahlala ihleli kwi-3.6 yepesenti ngonyaka, iyancipha kwizinto ezilindelekileyo ze-3.7 ipesenti ngonyaka.
Imilinganiselo ePhakamileyo, Ukunyuka kwamaxabiso okuZinzileyo Kutyhala iSalathiso seDola yaseMelika phezulu
I-Index ye-Dollar yase-US (i-DXY), elinganisa ixabiso ledola ngokuchasene nebhasikithi yeemali ezinkulu, ikhawuleza ukubuyiswa kwayo kwansuku zonke kunye ne-flirting kunye ne-SMA yeeyure ze-100 kufuphi ne-93.80 ngoLwesihlanu. Ngokusekelwe ekunyukeni kwamazinga ase-US kunye nokunyuka kwamaxabiso e-US ngokuqhubekayo, isalathisi sandisa ukubuyiswa kwayo ukusuka kwinqanaba le-93.30 kwaye ilawula ukufudukela kwi-93.75 / 80 band ekupheleni kweveki.
Enyanisweni, isivuno esingaphambili kunye nesisu sejika siphakamisa umlenze malunga neepesenti ze-0.55 kunye neepesenti ze-1.62, ngokulandelanayo, ngelixa isiphelo eside sibambelela kwintsimi efanelekileyo malunga neepesenti ze-1.98.
Emva kokuba amanani e-inflation yase-US elandelwa yi-PCE yenyuka i-4.4 ipesenti ngonyaka ukuya kuSeptemba, ngelixa i-Core PCE iphakame i-3.6 yeepesenti kwaye ihambelana nokufundwa kuka-Agasti, isalathisi safumana i-traction. Ukuchitha uBuntu kwi-0.6 yeepesenti ngenyanga ngenyanga, ngelixa uMvuzo woMntu wehla ipesenti ye-1.0 ukusuka kwinyanga edlulileyo.
Igolide (XAUUSD) idibanisa ngaphezulu kwe-1,775 yeedola njengoko iinkunzi zenkomo ziphinda ziqhubela phambili ukuya phezulu
Igolide (XAUUSD) is ukuwa emva kokukhatywa ukusuka kwindawo yokumelana ne-1,820 yeedola. Namhlanje, iibhere zizama ukwaphula ngaphantsi kwe-avareji ehambayo. Ukususela ngomhla we-15 kaJulayi, abathengi baye bahluleka ukugcina ixabiso ngaphezu kwe-1,820 ye-overhead resistance. Kwinyathelo lexabiso langaphambili, iibhere zaphuka ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo ukuya kufikelela kwi-1,728 yeedola. Namhlanje, ukuba iibhere ziphumelele ekuphuleni ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo, imarike iya kuhla ukuya kwinqanaba le-1,728 yeedola.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-SMA yeentsuku ezingama-50 zithambekile ngokuthe tye zibonisa indlela esecaleni. IGolide ikwinqanaba lama-49 leSalathiso saMandla aNxulumanayo kwixesha le-14. Oku kubonisa ukuba kukho ukulingana phakathi konikezelo kunye nemfuno.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, iGolide ikwinyathelo elihlayo. Ixabiso laphuka ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo ukuya kumgangatho ophantsi we-$ 1,775. Okwangoku, ngo-Oktobha 28 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50 % yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiswa kubonisa ukuba iGolide iya kuwela kwinqanaba le-2.0 isandiso seFibonacci okanye i-$ 1,775.20.
XAUUSD – 30 Mins Tshati
Igolide ingaphantsi koluhlu lwe-20% yestochastic yemihla ngemihla. Igolide iwele kwindawo ethengiswe kakhulu kwimarike. Abathengi kulindeleke ukuba bavele kwindawo ethengisiweyo yentengiso. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukuhla. Igolide ingaphezulu koluhlu lwe-25% yestochastic yemihla ngemihla.
Ixabiso leGold's (XAUUSD) lifikelele ekuphelelweni amandla. Isixhobo seFibonacci siqinisekisile ukuba ixabiso leGolide liya kuwela kwinqanaba le-2.0 isandiso seFibonacci okanye i-$ 1,775.20. Ukususela kwisenzo sexabiso, ixabiso leGolide liye lavavanya inqanaba leFibonacci kwaye liqalise ukudibanisa.
← Entsha izithuba1 2 ... 22 abaDala izithuba →